September | 2018 | HimiloNetwork
Himilo September 30, 2018	Leave a comment 248 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Nin u dhashay Koofur Kuuriya ayaa dunida kaga yaabsaday markii la arkay isaga oo ay daba ordayaan dhowr shimbiro oo ay Soomaalidu u taqaan ‘Uureey-ma-dhasho’. Waxay u daba socdaan sida aabe iyo hooyadood oo kale. Taniyo markii uu ka fiiqay ukumaha, waa isaga qofka kaliya oo ay ku indha-qaadeen markii ay usoo if baxeen adduunka. Wuxuuna ku ...
Himilo September 30, 2018	Leave a comment 327 Views
Beijing (Himilonetwork) – Gabar 6 sano jir ah oo ku nool gobalka Ningxia ayaa taniyo markii ay hooyadeed isaga fogaatay nolosha – iyada iyo aabaheed oo cuuryaan ah – waxay daryeelkii ugu wacnaa u fidisaa aabaheed oo cuuryaan ah. Tian Haicheng, oo ah 38 jir ah kuna nool Haiyuan County, Ningxia waxaa ku cadaatay talada afar sano kahor markii uu ...
Himilo September 30, 2018	Leave a comment 227 Views
Ottawa (Himilonetwork) – Kaddib shaqo dheer, Masjidkii ugu horreeyey ayaa maalintii shalay laga daah-furay Yukon oo ah gobalka ugu yar saddex gobal oo uu ka kooban dhulweynaha Kanada. “Waa tallaab cusub oo ka dhalatay dhanka waqooyi. Waxaana loogu yeeri doonaa Star Trek,” ayuu yiri Hussein Guisti, oo kamid ah Zubaidah Tallab Foundation. “Waad ku mahadsan tihiin inaad baqaar weyn u bedeshaan masjid ...
Himilo September 30, 2018	Leave a comment 610 Views
Himilo September 30, 2018	Leave a comment 268 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Sannado kahor waad rumeysan kartay in raggu kaga badan yihiin saxaafadda dumarka, in qof marwo ah aysan wada qabin karin mihnadda saxaafadda iyo shaqada guriga iyo in saacadaha xirfadan laga shaqeeyo aysan dumarka ku habbooneyn hase ahaatee sababahaasi oo dhan oo ahaa caqabadaha heystay dumarka saxafiyiinta ah way ka baxeen meesha hadda. Shaqada saxaafadda iyo aragtida dumarka dibadda ...
Himilo September 30, 2018	Leave a comment 789 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Wada noolaanshaha waxa ay ku haboontahy jecel iyo ku qanacsanaan ay isku qanacsanyihiin labada qof ee doonaya in ay wada noolaadaan, hadaba side loo heli karaa qoysas kuwada nool jeceyl iyo is marxabeyn? Heer intee la’eg ayuu la egayhay ku noolaanshaha jaceylka ee qoysaska Soomaaliyeed? Su’aalaasi waxaa ka jawaabaya Sheikh Ahmed Jowhari oo inta badan ka shaqeeya ...
Himilo September 30, 2018	Leave a comment 684 Views
Talo kaddib go’aanso inaad jebiso Tarmuuskaaga!
Himilo September 30, 2018	Leave a comment 618 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Tarmuusku wuxuu ka samaysan yahay caag ama macdan korka ku dahaaran iyo labo dhalo oo lakab isku ah oo dhexyaala caloosha. Labada dhalo waa kuwa lakab isku ah oo dhexdoodu banaantahay oo xitaa hawada laga saaray si uusan u lumin kulka ama qabawga lagu shubay. Tusaale nuuca shaahiga karinta kaddib lagu shubo waa mid loogu talagalay in uu ...
Himilo September 27, 2018	Leave a comment 252 Views
WASHINGTON, DC (Himilonetwork) – Milkiilaha maqaayad ku taalla caasimadda Maraykanka ayaa si maalinle ah u quudiya dadka hoy la’aanta ah si uu u sharfo dhaqankii wanaagsanaa ee hooyadiis ku dhaqmi jirtay. “Waxaan waligay ku duceysan jiray in haddii aan maqaayad furo aan maalinteeda koobaad ka quudiyo danyarta hoy la’aanta ah,” ayuu yiri Kazi Mannan, oo ah mulkiilaha maqaayadda Sakina Halal Grill ...
Tareenkii isku xiri lahaa Makka iyo Madiina oo ugu danbeyn Shaqo bilaabaya.
Himilo September 27, 2018	Leave a comment 281 Views
Jeddah (Himilonetwork) – Tareenkii ugu horreeyey oo casri – kaas oo isku xiri doona labada magaalo ee MAKKA iyo Madiina ayaa ugu dambeyn daaha laga rogay, sida ay soo xigatay VOA News. “Wuxuu xawaareyn karaa 300 oo kilomitir saacaddiiba, wuxuuna aad u dhimi doonaa waqtigii badnaa ee lagu socdaali jiray fogaanta u dhaxaysa labada magaalo,” ayuu yiri Mohammed Falaha, oo ah ...